Zvishongedzo zvevarume | Stylish Varume
Kwete kare kare varume vashoma vashoma vakashandisa complements kunzira yavo yekupfeka asi mazuvano zvishongedzo zvave kukosha muvanhurume varume, saka zvese rubatsiro pakusarudza, kutenga kana kuzvibatanidza zvichave zvishoma.
Muchikamu ichi Iwe unowana kubva kumatipi ekupa, kuburikidza nenhumbi izvo zviri kukonzera kutekenyedzwa uye izvo zvakagadzirisa maitiro. Kana iwe uchida kuve murume anoyemurika uye ane mbiri, usamire kushandisa zvishongedzo zvinogona kukupa iwe zvakasiyana kubata.
magirazi evarume vanemhanza
Kana iwe uchitsvaga magirazi ezuva evarume vane mhanza, chinhu chekutanga chaunofanira kuziva ndechekuti huwandu hwe…
Mhando dzemasokisi evarume
Kushanda kwemasokisi evarume kwave kwakakosha mumidziyo yedu. Tinoda izvozvo...
Mhando dzakanakisisa dzejasi dzevarume
Mumusika tinogona kuwana nhamba huru yemhando dzejasi dzevarume. Chinhu chekutanga chatinofanira kuva nacho mu…
Iwo 11 Mhando Dzakanakisisa dzeHati dzevarume
Kusarudza pakati pemhando dzakasiyana dzeheti dzevarume, kusiyana nemagirazi uye bvudzi, hapana…
Sunga clip: maitiro ekuiisa zvakanaka
kubudikidza Alicia tomero inoita 4 mwedzi .
Pini yekusunga inogona kuve chinhu chakakosha muzvipfeko zvemurume anoyevedza. Ehe…
Nzira yekusarudza magirazi epamusoro evarume
Paunenge uchisarudza modhi nyowani yemagirazi, haufanirwe kungozvimisira padhizaini iyo yakawanda…
Nzira yekuchenesa wristwatch
Mawachi mazhinji ewachi zvidimbu zvakasiyana zvinoda kugadziriswa nguva nenguva. Kana uchifunga kuti warasa...
Mhando dzeti tie
Kune varume vanoda kupfeka zvinoyevedza vane yakanakisa vhezheni mutayi uye marudzi emafundo, anogona ...
Mhando dzekupfeka dzevarume
kubudikidza Alicia tomero inoita 10 mwedzi .
Isu tinotsaura chikamu ichi kune akanakisa ezvipfeko zvigadzirwa, iwo anonyanya kugadzira zvimiro pakati pemurume akanaka uye ...
Mhando dzekutarisa dzepamusoro
kubudikidza Alicia tomero inoita 1 gore .
Mawadhi emabhande echirume evarume anoramba achiisa zvimiro. Maoko mazhinji anoda kumiririra chishongedzo sechidimbu icho ...
Sarudza magirazi ezuva akanakisa evarume muzhizha rino
kubudikidza ChiGerman Portillo inoita 1 gore .
Dzimwe nguva magirazi ezuva anongoshanda kwete kutidzivirira kubva kuchiedza uye kugona kuona zvakanaka, asi ...
Mhando dzekuboora nzeve kune varume
Ndeipi bhandi rakanakira bhurugwa rega rega?
Zvipfeko zvekupfeka zvekufukidza musoro nekunaka
Magirazi ezuva akakodzera chimiro chechiso chako
Bhandi rinodhura kwazvo pasirese, naGucci